डुवान रोक्न जनताको तटबन्धले के तयारी गरेको छ ? – sunpani.com
डुवान रोक्न जनताको तटबन्धले के तयारी गरेको छ ?
सुनपानी । १२ असार २०७८, शनिबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – बर्खा लागिसकेको छ । बर्खा लागेपछि राप्ती नदीमा बाढी आउँछ । तटीय क्षेत्रका बासिन्दा डुवानमा पर्छन् ।
चार वर्षयता राप्ती नदीमा ठूलो बाढी आएको छैन । यो वर्ष असार शुरुवातदेखि नै निरन्तर पानी परेको छ ।
बाढी रोक्न जनताको तटबन्ध कार्यालयले राप्ती नदीमा तटबन्ध बनाएको छ । केही दिनअघि परेको पानीले तटबन्धका केही भागमा क्षति पु¥याएको छ । स्थानीयको विवादले काम रोकिएको ठाउँबाटै तटबन्धमा क्षति पुगेको छ । तटबन्धमा पुगेको क्षतिलाई मर्मत गर्न, डुवान भइहालेमा तत्काल अस्थायी तटबन्ध गराउन र भारतले राप्ती नदीमा बनाइदिने भनेको तटबन्धका बारेमा के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिसम्बद्धहरु जनताको तटबन्ध कार्यालय, नेपालगञ्ज शाखामा पुगेका छन् ।
फियान नेपालको संयोजनमा संघर्ष समितिका सचिव राजकुमार शुक्ला, सदस्यहरु दुर्गाप्रसाद पाण्डे र मोल्हे धोवी जनताको तटबन्ध कार्यालयमा पुगेर इन्जिनियर महेशराज श्रेष्ठसँग सो सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन् ।
फियानका प्रकाश नेगीको उपस्थितिमा शुक्ला, पाण्डे र धोवीले सोनवर्षामा जनताको तटबन्ध भत्किने अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई तत्काल मर्मत गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘सोनवर्षामा तटबन्ध केही भत्किसकेको छ । यसलाई तत्काल मर्मत गरिएन भने त्यस आसपासका ६ गाउँ डुवानमा पर्छन्, धोवीले भन्नुभयो ।
पाण्डेले तटबन्ध बनाउदा पशुलाई आवतजावत गर्ने बाटोको ख्याल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । शुक्लाले भारतले गराइदिने भनेको तटबन्धको आश नगरेर नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो आफैले तटबन्ध बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बाढी आएर गाउँ डुवानमा पर्न थाले भने जनताको तटबन्धले के गर्छ ? भन्ने तिनै जनाको प्रश्नमा इन्जिनियर श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हामीसँग बोरा र नाइलन जाली तयारी अवस्थामा रहेको छ । तत्काल अस्थायी तटबन्ध बनाइदिन्छौं ।’
जनताको तटबन्धले राप्ती नदीमा १७.५ किलोमिटर तटबन्ध बनाएको छ । भारतीय अनुदानमा नदीको दाया २३ र बाया २२ किलोमिटर पक्की तटबन्ध बनाउने तयारी भइरहेको छ ।